မောင်တောမြို့နယ်၊ သင်္ဘောလှကျေးရွာနှင့် သာယာကုန်းကျေးရွာကြားမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မယ့် သူတွေကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်
Photo: Infomation Committee's Facebook
Wise folks. Good luck across the border. Be good to any country in which you reside.
Oct 07, 2017 01:08 AM